Wararkii ugu dambeeyey xiisadda dagaal ee ka taagan xadka Somalia iyo Kenya - Caasimada Online
Home Warar Wararkii ugu dambeeyey xiisadda dagaal ee ka taagan xadka Somalia iyo Kenya
Wararkii ugu dambeeyey xiisadda dagaal ee ka taagan xadka Somalia iyo Kenya
Beledxaawo (Caasimada Online) – Wararka ka imaanaya gobolka Gedo ee dhaca koonfurta Soomaaliya ayaa sheegaya in maanta dhaq-dhaqaaqyo culus oo iska soo horjeedo laga dareemayo xaduuda dheer ee ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya.
Ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Kenya ayaa lagu soo warramayaa inay dhaq-dhaqaaqyo milatari ka wadaan magaalooyinka Beledxaawo iyo Mandera oo ka kala tirsan labada dal.
Wararkaayaa sheegaya in saacadihii ugu dambeeyey dowladda Soomaaliya ciidamo badan ay geysay degmada Beledxaawo, kuwaas oo ka yimid dhinaca magaalooyinka Luuq iyo Duulow, si ay ugu biiraan, una xoojiyyaan ciidamada ku sugan halkaasi.
Sidoo kale Kenya ayaa dhankeeda dhaq-dhaqaaqyo iyo abaabul xoogan ka wada dhinaca magaalada Mandera oo ka tirsan gobolka Waqooyi Bari, halkaas oo iyana lagu arkayo diyaarado dagaal, gaar ahaan nooca Helicopter-ka ah oo joog hoose ku duulaya.
Xaaladda ayaa haatan aad u kacsan, iyadoona dadka deegaanka ee ku dhaqan xadka ay cabsi ka muujinayaan in dagaal uu ka dhaco halkaasi.
Dhanka kale Maxamed Axmed Caraaye oo ah guddoomiye ku xigeenka magaalada Mandhera ayaa sheegay in xaaladda ay si adkaaneyso, islamarkaana shacabka ku nool labada magaallo ay saameyn ku yeesheen dhaq-dhaqaaqyada ay wadaan labada dal.
Caraaye oo BBC-da la hadlay ayaa ugu baaqay madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya inay wada-hadal u ku dhameeyaan xiisada u dhexeysa labada dowladood.
“Waxaan ugu baaqayaa Madaxweyne Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta inay isku noqdaan oo xiriirka labada dal dib u soo celiyaan, wixii dhib jira wada hadal lagu xaliyo, awalba xuduuda waa xirnaa, balse waa la isu gudbi jiray xaalada waa sii adkaaneysaa,”ayuu yiri.
Arrimahan ayaa ku soo aadaya, iyada oo maanta dalka Jabuuti uu ka furmayo shirka Urur Goboleedka IGAD oo looga hadlayo khilaafka u dhexeeya Soomaaliya & Kenya.